Antivirus ကို Avira နဲ့ Avast နှိုငျးယှဉျ
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များ၏လုံခြုံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် Anti-virus ၏ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်အစဉ်အမြဲကြီးစွာသောတာဝန်နှင့်အတူကုသရပါမည်။ ပြည့်စုံကာကွယ်မှုစနစ်အားအခမဲ့ Analogues အတော်လေးအောင်မြင်စွာတာဝန်များကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်အဖြစ်ပေးဆောင် antivirus ကိုဝယ်ခြင်းငှါမရှိတော့ယခုလိုအပ်သောဖြစ်ပါတယ်။
Avast အစီအစဉ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်အခမဲ့ antivirus ကို tools များအကြားတွင်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဟုသတ်မှတ်ပါသည်။ ကံမကောင်းစွာအချို့အသုံးပြုသူများတပ်ဆင်ခနှင့်အတူပြဿနာများပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ Avast software ကို installed မဟုတ်သည့်အခါဘာလုပ်ရမှန်းထွက်ရှာကြပါစို့? သင်တစ်ဦးအစပြုသူနှင့်ဤ tools များ install လုပ်ပါအပေါငျးတို့သရှုပ်ထွေးပွေလီလှနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မဟုတ်ပါကတစ်ခုခု installation ပရိုဂရမ်လုပ်နေတာမှားကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Antivirus ကို Avast Free Antivirus မှခြွင်းချက်ထည့်သွင်းခြင်း
မမှန်သောနှိုးဆော်သံသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်များနှင့်ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုအားလုံးနီးပါး Anti-virus တွေရဲ့ပြဿနာကသော့ခတ်။ ဒါပေမယ့်ကံကောင်းထောက်မစွာ, ခြွင်းချက်ထည့်သွင်း၏ function ကိုကျေးဇူးတင်, ဒီအတားအဆီးကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်။ အစီအစဉ်များနဲ့ Web လိပ်စာများသီးခြားစာရင်းလုပ် Antivirus ကိုပိတ်ဆို့မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ Avast Anti-virus ကိုခြွင်းချက်အတွက်ဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့ web address ကို add ဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
Avast Antivirus ကိုအပြေးပြဿနာများ: အကြောင်းရင်းများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ
Avast အစီအစဉ်ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့အတည်ငြိမ်ဆုံးအခမဲ့ antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ၏တဦးတည်းစဉ်းစားသည်။ သို့သော်၎င်း၏အလုပ်တွင်လည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည်။ လျှောက်လွှာရိုးရိုးမစတင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာအမှုပေါင်းရှိပါတယ်။ ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ကြပါစို့။ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဖန်သားပြင် Anti-virus ကာကွယ်မှု Avast start မည်မဟုတ်ကြောင်းအသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာကို disable program ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဖန်သားပြင်တစ်ဦးပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းတိုး Avast: ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာပြဿနာဖြေရှင်းနည်း
ကိစ္စတွင်ယင်း utility ကို၏ယခင်ဗားရှင်းများတွင်ဖြစ်သကဲ့သို့အစပိုင်းမှာကုမ္ပဏီ Avast, Avast antivirus ကိုအသုံးပြုသူများသည်အခမဲ့ Antivirus ကို 2016 ဘို့မသင်မနေရမှတ်ပုံတင်ဖျက်သိမ်း။ သို့သော်မရဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့သည်မသင်မနေရမှတ်ပုံတင်ရေးပကတိဖြစ်လေ၏။ အခုတော့ antivirus ကိုကြိမ်နှစ်ကအပြည့်အဝအသုံးချမှအသုံးပြုသူများကဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရှောက်သွားရကြမည်။
ပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေကို Avast Antivirus ကို Recover
တခါတလေအဲဒီမှာအပြုသဘော antivirus ကိုမှားယွင်းသောဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအမှုပေါင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့လုံးဝလုံခြုံဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ antivirus ကိုအရေးပါတဲ့စာရွက်စာတမ်းသို့မဟုတ် file system ကိုဖျက်ပစ်လျှင်ဒီတော့ဝေးလံခေါင်ဖျားနည်းနည်းအရေးပါမှုသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေရေးအကြောင်းအရာဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကမကောင်းဘူး, ဒါပေမယ့်ဘာလဲ? Avast ဖိုင်တစ်ခုဖျက်ပစ်လျှင်, ယူကိုအဘယ်သို့ရှာဖွေကြပါစို့, ထိုသို့ restore ဖို့ဘယ်လို။
နေရာအရပ် quarantine တည်နေရာ Avast antivirus ကို
မကြာခဏဆိုသလိုလှုပ်ရှားမှု antivirus ကို quarantine ထဲမှာသံသယဖြစ်ဖွယ်ဖိုင်တွေပို့ခြင်း, ဗိုင်းရပ်စ်အလားတူတွေ့ရှိသောအခါ။ သို့သော်ဤအရပ်ဌာနတည်ရှိရာမဟုတ်တိုင်းအသုံးပြုသူကိုသိလျက်ကိုယ်စားပြုအဘယ်အရာကို။ Quarantine - antivirus ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများနှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖိုင်တွေသယ်ဆောင်, ထိုအရပ်၌သူတို့ကစနစ်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုယ်စားပြုမပြုစာဝှက်ထားတဲ့ပုံစံထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်ဘယ်မှာသင့် hard drive ကိုအပေါ်တစ်ဦးအခြို့သောကာကွယ်ထားသည် directory ။
Browsing Avast SafeZone Browser ကိုဖျက်ပစ်ပါ
Built-in browser ကို Avast antivirus ကို Avast SafeZone Browser ကိုသူတို့ရဲ့ privacy ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်မကြာခဏအင်တာနက်မှတဆင့်ငွေပေးချေထွက်သယ်ဆောင်နေသောလူများအတွက်မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သို့သော်အင်တာနက်ပေါ်ရှိနေ့စဉ် surfing များအတွက်ပိုပြီးလူကြိုက်များ browser များကိုအသုံးပြုဖို့သူအပါဆုံးအခြားအသုံးပြုသူများအဘို့ဟုရိုးရှင်းစွာနာမည်ကြီး antivirus ကိုမှမလိုအပ်သော appendage ဖြစ်ပါတယ်။
Installing anti-virus ပရိုဂရမ် Avast Free Antivirus
ကံမကောင်းစွာပဲအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော anti-virus program အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤအမှု၌သာယာသောခြွင်းချက် Avast antivirus ကိုအခမဲ့ဗားရှင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားတာဖြစ်ပါတယ်လျှောက်လွှာများ၏ paid version နောက်ကွယ်မှလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမတွေအများကြီး Avast Free Antivirus, ဖြစ်ပြီး, ယုံကြည်စိတ်ချရ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ယေဘုယျထဲမှာယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်။
Antivirus ဆော့ဖ်ဝဲ Avast Free Antivirus နှင့် Kaspersky အခမဲ့နှိုငျးယှဉျ
ဒါဟာတာရှည်တည်ဆဲ Anti-virus ဆော့ဖ်ဝဲအချို့နေ့စွဲဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, အသုံးပြုသူများသည်အကြားဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့သညျ။ ရှယ်ယာမှာနိယာမ၏အမှုကြောင့်သို့သော်သာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိ - ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ကျူးကျော်သူတွေကဆန့်ကျင်မှုစနစ်ကာကွယ်မှု။ ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အခမဲ့ antivirus ကိုဖြေရှင်းချက် Avast Free Antivirus နှင့် Kaspersky အခမဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါစို့, နှင့်အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ရန်။
Avast antivirus ကို disable လုပ်ဖို့
တချို့ပရိုဂရမ်မှန်ကန်သောတပ်ဆင်ဘို့တခါတရံ antivirus ကို disable လုပ်ဖို့လိုအပ်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, အားလုံးအသုံးပြုသူများပိတ် function ကိုစားသုံးသူအဆင့်အထိထိုးထွင်းသိမြင် developer များအားဖြင့်စတင်ခြင်းမရှိပါသကဲ့သို့, antivirus ကို Avast ကို turn off ဖို့ဘယ်လိုမသိ။ ထို့အပွငျလူအများစု user interface ကိုအပေါ်ကိုချွတ် button ကိုရှာနေကြပါသည်, သို့သော်ဤခလုတ်ကိုရိုးရှင်းစွာမရှိသောကွောငျ့, ကမတှေ့နိုငျပါသညျ။
အဘယ်အရာကို Avast ဖယ်ရှားလျှင်မ
စံနည်းလမ်းကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ avast! antivirus ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အဘယ်မှာရှိအမှုပေါင်းရှိပါတယ်။ ဤသည်ဖိုင်များကိုဖယ်ရှားမှုကိုထိခိုက်ပျက်စီးသို့မဟုတ်ဖျက်ပစ်, ဥပမာ, အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တောင်းဆိုချက်တစ်ခုနှင့်အတူကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များမှဖွင့်ရှေ့တော်၌ဒါပေမဲ့: "! အကူအညီငါ Avast ကို uninstall လုပ်လိုက်လို့မရပါဘူး" သင်ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်လက်နှင့်ကိုယ်အခွအေနေကို fix ဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါတယ်။
Anti-virus ပရိုဂရမ် Avast Free Antivirus များ၏ဖယ်ရှားရေး
Anti-virus software ကို Install အများစုကိစ္စများတွင်, လွယ်ကူသောညွန်ပြခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူခက်ခဲသည်မဟုတ်, ဤအပလီကေးရှင်းများဖယ်ရှားရေးနှင့်အတူကြီးမားသောပြဿနာများရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ Anti-virus ကို system ကိုအမြစ် directory ထဲတွင်, registry ကို၌၎င်း, များစွာသောအခြားအရပ်တွင်၎င်း၏သဲလွန်စအရွက်ကြောင်းလူသိများသည်, ဤပြင်းအားတစ်အစီအစဉ်မလျော်ကန်သောဖယ်ရှားရေးကွန်ပျူတာအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။